STP Forex Broker - Varotra fanadiovana foibe Forex (FXCC)
Jereo ny lahatsary feno
Ny tranonkalanao dia tsy manohana ny lahatsary HTML5.
Ny FXCC dia niorina tamin'ny 2010 avy amin'ny vondron'olona matihanina amin'ny varotra fifanakalozana, ary nanorina ny traikefa naharitra teo amin'ny tsena ara-bola izy ireo, nikendry ny hanangana serivisy izay mifototra amin'ny fenitra avo lenta izay takian'ny mpanjifa. Ny orinasa dia ahitana ekipa matotra matihanina manana traikefa be dia be ao amin'ny indostria ara-bola.
Hanolotra ny sosokevitra ankapobeny indrindra amin'ny indostria. Manolo-kevitra ny fahombiazan'ny mpanjifa izahay, amin'ny fanomezana ny vidin'ny fifaninanana, amin'ny alalan'ny fomba amam-panao tsara indrindra sy mangarahara indrindra amin'ny tsenan'ny varotra antsinjarany. Ny tanjon'ny FXCC dia ny hanome hery ireo mpanjifany amin'ny fitaovana rehetra ilainy, hampivelatra ny fahaiza-manaony, ary hanana ny traikefa ara-barotra tsy mahazatra, mandritra ny dingana rehetra ataon'izy ireo.
Mendri-pitokisana, mangarahara ary mazoto
Ny modely an'ny ECN / STP an'ny FXCC dia manolotra matihanina, mpandraharaha mavitrika, manampahefana mpandoa hetra ary mpanjifan'ny orinasa manana fidirana mivantana amin'ireo vidin-tserasera mivantana mivantana avy amin'ny mpamatsy vola mivantana.
Ny modely ECN / STP dia manome ny FXCC mpanjifa ny fahafahana hivarotra amin'ny sehatra fitiliana bebe kokoa. Ny FXCC dia niasa mafy tamin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny Forex amin'ny mangarahara kokoa amin'ny fanaraha-maso bebe kokoa ho an'ny mpivarotra.
Ny modely momba ny raharaham-barotra voafaritra dia mifototra amin'ny fampiasana ny "Directional Processing" (STP)), izay nandefasana ny baikon'ny mpanjifan'ny FXCC any amin'ireo orinasa manam-bola sy mahafeno ny fepetra ara-bola, manapaka ny mety amin'ny vidin'ny vidiny, na ny fifandonana mahaliana eo amin'ny mpanjifa.
Ny modelim-panafahana 'No No Dealing Desk' an'ny FXCC dia tsy misy mpanelanelana amin'ny mpivarotra ary tsy misy fanamarihana indray. Ny varotra mpanjifa dia natao amin'ny vidiny omena ny FXCC amin'ny mpamatsy vola lique. Ny Aggregateur Price Price dia mijery avy hatrany ireo mpivarotra azo antoka fa tsy hahazo afa-tsy ny fividianana Bid / Ask tsara indrindra, mba hiantohana fa ny didim-pitondrana rehetra dia atao amin'ny fomba tena mifanentana sy mangarahara.
Fa maninona no mametraha ho an'ny Standard raha afaka
mahatsapa ny fahasamihafana?
Nanana & Niorina
Ho an'ny mpivarotra hatramin'ny 2010, manaraka ny fomba fiasa sy ny fomba tsara indrindra hahatratrarana ny zavatra antenainao
Raha manana traikefa ambony sy fahalalana isika, dia tapa-kevitra isika hahatakatra izay ilaintsika amin'ny mpanjifa ary hanohanana ny mpivarotra amin'ny fanatratrarana tanjona sy tanjona tetiky ny tetikasa. Amin'ny fanolorana valisoa miavaka, ny serivisy VIP misy, miaraka amin'ny mpanam-bola 24 / 5, dia manome ny fototra tena ilaina mba hahombiazana.
Manome toky fa ny didy rehetra dia novonoina tamin'ny fomba tena mifanentana sy mangarahara
Mifantoka amin'ny fampihenana ny vidin'ny varotra ho zero ary hampitombo ny fahafahanao manao varotra
Manolo-kevitra ny fahombiazan'ny mpanjifa izahay, amin'ny alàlan'ny fanolorana ny vidin'ny fifaninanana, amin'ny alalan'ny fomba amam-panao tsara indrindra sy mangarahara indrindra amin'ny tsenan'ny varotra antsinjarany. ECN XL, fantatra amin'ny hoe ny kaonty ZERO no iray amin'ireo kaonty ara-barotra mahomby indrindra.
Tontolo iainana matanjaka
Nisoratra anarana ny orinasa fampiasam-bola
ao amin'ny Repoblika Vanuatu
miaraka amin'ny laharana fisoratana anarana 14576.
Authorized ary fehezin'ny CySEC
tahaka ny orinasa orinasa orinasa Sinoa (CIF)
miaraka amin'ny Licensing Number 121 / 10.
Hizaha ny mpikambana rehetra sy ny fisoratana anarana
Ny mpikarakara ny #1 Choice
FANONTANIANA MAHAFINARITRA * Terms & Conditions dia mihatra